မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတဲ့ (၁၀)ချက်...
သူငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေကို တန်ဖိုးထားတာတွေ၊ ခင်တတ်တာတွေ၊ outgoing ဖြစ်တာတွေ မြင်သွားတယ်။ရင်လာဖွင့်ချင်တယ်။ ရမလား မမီ :P
ကျွန်တော်လည်း လာဖွင့်ချင်တယ် မမီရယ်.. (ရင်ဘတ်). :)ဟုတ်တယ်. မလေးပြောသလိုပဲ. မမီရဲ့ Character တော်တော်များများက ဘော်ဘော်တွေကို ခင်တွယ်သံယောဇဉ်ရှိတာလေးတွေ ပါနေတယ်. ကောင်းတယ်ဗျာ. စလုံးကို ၀င်ဖြစ်ခဲ့ရင် စရိတ်ငြိမ်းနော်. ဟတ်ဟတ်.နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ မှားတာတွေကို သိလျက်နဲ့ ပြင်သင့်လျက်နဲ့ ဘယ်တော့မှ ပြင်ဖို့မကြိုးစားတတ်တာကိုလဲ မုန်းပါတယ် (အရင် ၁၀နှစ်ကထက် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမရှိခဲ့တာ ဒီအချက်ကြောင့် ထင်ပ)အဲဒါ ဘယ်သူ့ကိုစောင်းပြောတာလဲဟင်... သတိထားဦးနော်. :Dအမြန်ဆုံးနဲ့ အမှန်ကန်ဆုံး ရင်ဖွင့်ရေးသားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး မမီရေ...တိတ်ကဲ and အောလ်ဒယ်ဘက်စ် တူယူ...:)Y.